Ny lazain'ny mpianatra Hacettepe amin'ny fampiharana Solo Bus - RayHaber
HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 06Ny lazain'ny mpianatra Hacettepe amin'ny fampiharana Solo Bus
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş Ankara 06, Central Anatolia, ANKAPOBENY, Highway, Tire Wheel Systems, TORKIA 0
Inona no lazain'ny mpianatra fangatahana bus hacettepeli solo
Ny ben'ny tanàna ao Ankara Mansur Yavaş, izay mihaino ny feon'ireo mpianatra ary mihaino ny fitakian'izy ireo dia manohy mandray fanapahan-kevitra izay mahafaly ny mpianatra.
Eo ambanin'ny teny filamatra hoe "Renivohitra renivohitra", Andriamatoa Yavaş, izay nametraka ny serivisy izay mandray anjara amin'ny toekaren'ireo mpianatra any amin'ny faritra maro avy amin'ny volavolan-dalàna mankany amin'ny fitaterana, dia nahatanteraka ny fampanantenany tsirairay.
Ny filoha Yavaş, izay nanombana ny fihenam-bidy 50 momba ny volan'ny rano ho an'ny mpianatra, dia nanao sonia vao haingana izay fanapahan-kevitra izay manahy akaiky ireo mpianatra mandalina ao amin'ny Kampus Beytepe ao amin'ny Oniversite Hacettepe.
TRANO TANY NANOMPO BOLA TANY
Noho ny baikon'ny Ben'ny tanànan'ny Metropolitan Ankara Mansur Yavaş, dia nanomboka nanome serivisy bus 20 maimaimpoana maimaimpoana ao amin'ny oniversite Hacettepe Beytepe Campus, izay misy maherin'ny arivo ny mpianatra 5 mihetsika isan'andro.
Ny fiara fitateram-by 21 maimaim-poana ivelan'ny fiara fitaterana bus 5 dia hitondra mpianatra maimaimpoana mankany amin'ny faritry ny fivoahana amin'ny làlambe Çayyolu eo anelanelan'ny ora 7-06.30 amin'ny andro 20.00 amin'ny herinandro.
Ireo mpianatra izay nampiasa ny fiara fitateram-bahoaka tamin'ny andro voalohany tamin'ny fampiharana dia naneho ny fahafaham-pony ary nisaotra ny ben'ny tanàna Yavaş ireto teny manaraka ireto:
-Irem Aslan (21 taona): oldu Tena fanapahan-kevitra tsara tokoa izany. Satria nitombo isan'andro ny filan'ireo bus bus ka peratra ary ny fiandrasana an-tsika dia lasa fampijaliana anay. Tianay ny misaotra ny Filohantsika Mansur Yavaş noho ny nandrenesanay ny feonay sy nanome anay izao fitaterana maimaimpoana izao. ”
-Adem Üngör (24 taona): oldu Tena tsara ny manana fampiharana toy izany eo anelanelan'ny ora 6.30-20.00 satria izao no ora faran'izay henjana. Misaotra an'Andriamatoa izahay
-Adandan Yüksel (21 taona): “Heveriko fa tena nahasoa. Sarotra be ny niandry teto raha handeha an-tsekoly. Misaotra betsaka amin'ireo tolotra maimaimpoana. ”
-Esra Şahin (20 taona): ım Ny ben'ny tanàna no nasehonay fa efa nieritreritra ny momba ny mpianatra izy hatramin'ny andro voalohany nitantanany. Tena tsara ny nisy fiara fitaterana ireo nandritra ny ora farany. Tianay ny misaotra ny Tompontsika Mansur. ”
- Sinan Uyar (19 taona): “président tiantsika ny Mansur Yavaş. Niasa ho an'ny mpianatra. Manohana ny toekarentsika io. Nekeny ihany koa ny famoahana ny karatra 60 board board 200 TL. Misaotra betsaka. ”
-Melih Toy (19 taona): uz Manaraka ny asan'i Mansur Yavaş ho an'ny mpianatra izahay. Ny fiara fitateram-bahoaka tsy misy solo dia mampihena ny filaharana amin'ny fiara fitaterana sy fiandrasana, ary na dia maivamaivana aza. Misaotra anao noho ny fanohananay. ”
-Mystery Muslim (20 taona): "Tiako be izany. Ity fampiasa amin'ny fiara fitateram-bahoaka ity dia tena tsara ho an'ny mpianatra, satria ny vola aloan'ny mpianatra dia efa voafetra. Misaotra betsaka an'i Mansur Yavaş. ”
Hanomboka amin'ny volana oktobra koa ny 60 TL sy 200 board card application, izay vaovao tsara nomen'ny filoham-pirenena Yavaş.
Fampahafantarana momba ny tolotra: Fiara mandeha amin'ny ala voajanahary sy solo 06 / 06 / 2013 Ny bala sy solosaina karazana fiaramanidina fiara voaisa dia hividy. Ny fampahafantarana amin'ny antsipiriany momba ny fanolorana dia toy izao manaraka izao: Antontan-taratasy fangatahana: 100 / 40 60-a) Adiresin'ny antotan'isa: Yenişehir Mh. Vatan Cd. Tsia: 4734 Selçuklu / KONYA b) Telefaonina sy laharana fakatahaka: 19 - 2013 c) Adiresy mailaka: satinalma@konya.bel.tr ç) Adiresy Internet ahafahana mijery ilay taratasy fangatahana (raha misy): https://ekap.kik.gov. Tr / EKAP / 63053-Zana-tsoratra ...
33. Fetiben'ny sarimihetsika ao Istanbul milaza Renault amin'ny Motor 07 / 04 / 2014 Ny tranoben'ny Film Festival ao Renault sy Motor dia manambara fa: Renault dia nanohana ny fikarakaràn'ny fetiben'ny sarimihetsika erantany, ny 20 nokarakarain'ny Fondation Istanbul ho an'ny Kolontsaina sy ny Arts, ary ny 33 dia hitohy hatramin'ny volana Aprily. Mampiseho izany ao amin'ny Fetiben'ny sarimihetsika ao Istanbul. 100 an'ny Tiorka Tiorka. Mankalaza ny taonany, 33. Tamin'ny fampisehoana voalohany tao amin'ny Fetiben'ny Sarimihetsika any Istanbul, dia nitondra ny anarana malaza izay heverina ho mendrika ny fankalazana ny fankalazana ny Fetibe ho an'ny karipetra mena miaraka amin'ny "Gider Go" amin'ny sarimihetsika "Renault". Nandritra ny lanonana dia hanome ny "Gider Go" amin'ny sarimihetsika "Vehivavy amin'ny anarana malaza vahiny nantsoina ho any amin'ny firenentsika" i Renault. Ankoatra izany, ireo mpankafy sinema izay manaraka an'i Renault ao amin'ny Facebook dia afaka hahazo ny tapakila amin'ny horonan-tsary tena mendrika indrindra amin'ny fetibe. Renault dia matevina sy matanjaka ...
Mitaraina ireo mpandeha fa iETT kosa milaza fa metrobus air conditioners dia ampy 03 / 04 / 2013 Mitaraina ireo mpandeha, fa IETT milaza ny metrobus air conditioners ampy Ny teboka Metrobus ampiasain'ny olona an'aliny isan-andro dia manome asa fanompoana lehibe. Na izany aza, noho ny hamafin'ny hatsiaka ao amin'ny fiompiana 'fiompy' dia miteraka fitarainan'ny mpandeha. Nilaza ireo manampahefana IETT: "Miasa ireo mpanadio anay. Ny fofona dia vokatry ny hamafin'ny hatsiaka. Ny mpandeha dia manantena ny hamaha ny olana amin'ny fotoana fohy. Ao amin'ny metrobus, izay fiara fitateram-bahoaka indrindra any Istanbul, dia tsy ho vita mihitsy ny hiaina mandritra ny ora fiasàna sy ny fahatongavana noho ny firoboroboana tafahoatra. Ny zava-misy fa tsy miasa amin'ny fiara sasany ny rivotra, miaraka amin'ny fofona avy amin'ny bellows amin'ny fiara fitateram-bolo lehibe, dia ho an'ireo mandeha amin'ny metrobus ...
Inona no lazain'ny mpandeha sy ny mpitsabo mpanampy amintsika? 17 / 04 / 2013 Inona no lazain'ny mpandeha sy ny mpitsabo mpanampy amintsika? Omaly no nitokona ireo mpandeha; Androany ny andro fitokonan'ny mpiasan'ny fahasalamana avy amin'ny dokotera ho an'ny mpanolotra! Tsy tafiditra ao anatin'ny fitokonan'ny fiarandàlamby ny fiarahamonin'ny Railway-İş sy ny fikambanan'i Memur Sen ao Türk-İş, raha ny sendikan'ny fahasalamana-İş sy Sağlık Sen izay mifandray amin'i Türk-İş dia mifandray amin'ny Türk-İş amin'ny tolona ataon'ny mpiasa amin'ny fahasalamana. Mazava ho azy fa tsy mitranga eo amin'ireo mpitantana ny sendika "Inona no toerana," dia miteraka toe-javatra iray. Satria ireo mpitantana an'ireny sendika ireny dia mendrika ny sendikany tahaka ny fandefasana ny sendikà mpiara-miasa ». Saingy ho an'ny mpiasa miasa ao amin'ireo sampana ireo, azo lazaina fa tsy azo averina intsony ny sainam-pirenen'ireo fitondram-panjakana sendikaly ireo. Satria ny governemanta hükümet
İSPARK Traffic, hoy ny mialoha 21 / 10 / 2013 İSPARK Mitatitra ny fifamoivoizana mba hitohy amin'ny làlana tokony hijanonana amin'ny kianja: feno ireo toeram-piantsonana izay napetrak'i İSPARK teo akaikin'ny toeram-pitateram-bahoaka. Noho ny tombontsoa goavana dia miasa ny orinasa mba hamorona sehatra vaovao. I İSPARK dia nanatsara ny tetikasa 'Park, Continue' izay natombok'ireo mpamily izay manohy ny fiara manerana ny metro, metrobus, sambo ary Marmaray. I İSPARK dia nanangana toeram-piantsonana 34 hatreto, ary 10 dia nanosika fiara an'arivony maro teny an-dalana ary namonjy ny fifamoivoizana tao Istanbul amin'ny seranana 100 kilometatra. Mpitsidika tonga any amin'ny kianjan'i Metrobus fa tsy afaka mijanona satria ny fiara tsy mitady sehatra ...
Olom-pirenena ao Kocaeli Faly miaraka amin'ny Mobile Stops
Fampahafantarana momba ny tolotra: Fiara mandeha amin'ny ala voajanahary sy solo
33. Fetiben'ny sarimihetsika ao Istanbul milaza Renault amin'ny Motor
Mitaraina ireo mpandeha fa iETT kosa milaza fa metrobus air conditioners dia ampy
Inona no lazain'ny mpandeha sy ny mpitsabo mpanampy amintsika?
İSPARK Traffic, hoy ny mialoha
Milaza i İSPARK 3 fa mitohy ny zaridaina ao TL
Ny mpanohana an'i Kocaelispor dia milaza fa tsy ny maitso maitso maitso
Ny zavatra lazain'ny olona amin'ny fanendrena an'i Süleyman Karaman ho an'ny Parlemanta (Video)
BTS no milaza ny tsia amin'ny fiakaran'ny lozam-pifamoivoizana izay mitranga
EGO Drivers no milaza ny herisetra atao amin'ny vehivavy